robot(robot) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
कोरोना संकटबीच दीक्षान्त समारोह, विद्यार्थीको प्रमाणपत्र लिन रोबोट पठाइयो
काठमाण्डौ । यतिबेला कोरोनाभाइरसका कारण विश्वका सबैजसो देशहरु लकडाउनमा रहेका छन्। विश्वभरका स्कुुल, कलेज र अन्य शिक्षण संस्थाहरु सबै बन्द अवस्थामा रहेका छन्। यस्तोमा जापानमा एउटा दीक्षान्त समारोहमा एकदमै अद्वितीय दृश्य देखिएको छ। जापानको बिजनेस ब्रेक थुु्र टेक्नोलोजी (बीबीटी) युुनिभर्सिटीमा दीक्षान्त समारोह आयोजना गरिएको थियो।...
कोरोना संकट : के लकडाउनपछि मानिसको स्थान रोबोटले लिनेछ ?
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेपछि विश्वका मानिसले एउटा अर्को खतराका बारेमा भुलिरहेका छन्। त्यो हो यो संकटपछिको विश्वमा तीवग्रगतिमा रोबोटको उदय। विश्लेषकहरुको भनाइ छ कि राम्रो होस् वा नराम्रो तर यो सच्चाइ हो कि अबै थुप्रै काममा मानिसको ठाउँमा रोबोटले स्थान पाउनेछन्। कोरोना संकटले अहिले यो दिशामा अधिकांश देशले प्रयास अगाडि...
दुरुस्तै मान्छेजस्तै देखिने रोबोट बन्दै, वास्तविक मानिसको अनुहार खोजिँदै
काठमाण्डौ । लन्डनको टेक्नोलोजी कम्पनी जियोमिकले आफूले बनाउने रोबोटका लागि मानिसको अनुहार खोजिरहेको छ । कम्पनीले यसका लागि नेरु १ करोड ४७ लाख २० हजार दिन तयार छ । तर कम्पनीले यसका लागि एउटा सर्त पनि राखेको छ । अनुहार दयालु र सबैले मन पराउने हुनुपर्छ । व्यक्तिको छनोट भइसकेपछि कम्पनी अनुहारका लागि बकाइदा एग्रिमेन्ट गर्नेछ र ती&nb...
काठमाण्डौ । जन्म असत्य हो । मृत्यु सत्य हो । जन्म अनिश्चित हुन सक्छ तर मृत्यु निश्चित छ । यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । तर के मानिस साँच्चैमा अमर बन्न सक्छ त ? सायद पत्याउन गाह्रो पर्ला । तर यो असम्भवलाई सम्भव बनाउने प्रयासमा खटिएका छन्, रसियन बिजनेसम्यान मिट्री इट्सकोब । इट्सकोबको दाबी छ सन् २०४५ सम्म मानिसलाई अमर बनाउन सकिन्छ । उनले...
रोबोट रोजगारी: कसरी चीनमा सम्भवत: सबभन्दा बढी रोजगारी खोसिन सक्छ ?
लन्डन । उत्पादन क्षेत्रका २ करोड रोजगारी सन् २०३० सम्ममा यन्त्रमानव अर्थात् रोबोटले विस्थापन गर्न सक्ने एउटा विश्लेषक संस्था अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले जनाएको छ। यस्ता कामबाट विस्थापित मानिसहरूले सेवा क्षेत्रमा पनि स्वचालित यन्त्रका कारण त्यसैगरी मानव रोजगारीको सङ्ख्या घटेको पाउने उक्त संस्थाको भनाइ छ। तर बढ्दो स्वचालनले रोजगारी...
रोबोटका कारण भोकै हुनुपर्ने अवस्था, ३० प्रतिशत कामदारमा त्रास !
काठमाण्डौ । रोबोटको तीव्र विकास र यसलाई विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने क्रम बढेसँगै यो मानवका लागि समेत खतरा साबित बन्दै गएको छ । ब्रिटेनमा मात्र करिब १ करोड कामदारको जागिर रोबोट वा आर्टिफिसियल इन्टलीजेन्सका कारण धरापमा पर्नसक्ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । रिपोर्टका अनुसार आउने १५ वर्षभित्र ब्रिटेनमा करिब ३० प्रतिशत कामदारको...